Maxaad Zetar - Zetar Industry Co., Ltd.
Qaab duritaanka caaga
Qaab Extrusion caaga
Silikoon wax taaj oo kale duritaanka
Bed Trabatoni bahal
Dog Tooth caday
Our Site Alibaba
Aasaasay sannadkii 2005, oo ku salaysan xaq halkan Shanghai China.At ee 2017, waxaan ka abaal marin ah "Shiinaha qeybiye Tayada Sare" abaalmarinta by Alibaba oo si fiican u yaqaan sida hoggaamiye ee deg deg ah-jeedo, qiime jaban Shiinaha wax taaj oo kale duray caag ah, duray caag ah tooling iyo adeegyada wadanay degdeg ah.
2016 Zetar guurtay dukaan 50,000-square-foot taas oo ku dhawaad ​​35km ka Shanghai Dekadda iyo Airport Pudong iska. Haddaba Zetar ayaa 6 injineero ka tirsan, oo dhan waxay leeyihiin waayo-aragnimo ka badan 10 sano in industry wax taaj oo kale duray caag ah. Oo dadka badhkiisna waxay kaloo la hadli kartaa Ingiriisi.
In ka badan 13 sano, waxaana u adeegeen deg deg ah-jeedin wax taaj oo kale duray caag ah iyo wasakhahaasi duro caag baahida shirkadaha waaweyn iyo kuwo yaryar - ka Fortune 100 si cusub oo bilowga ups.We've codsatay our khubaro si kala duwan ee warshadaha, oo ay ku jiraan qalabka caafimaadka, baabuurta, daryeelka caafimaadka, korontada, wax xirxiraan, wax dhismaha, qoyska, alaabta lagu ciyaaro, qalabka isboortiga dibadda iyo in ka badan. No macno kakanaanta ee design ama tiro ka mid ah si
No.58 Xinyuan Road, Degmada Jiading, Shanghai, Shiinaha
Duro wax taaj oo kale Tool, Injection Molding, Duro doorsoon caaga, Qaybo ka mid caag ah, Qaybo ka duray doorsoon, Overmolding wax taaj oo kale duritaanka,